मंगलवार, बैशाख २, २०७७ समय खवर
नयाँदिल्ली । भारतमा थप उन्नाइस दिनका लागि लकडाउन लम्ब्याइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मे ३ (वैशाख २१)सम्म लकडाउन बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
गत मार्च २४ मा घोषणा गरिएको पहिलो चरणको लकडाउन बुधबार सकिँदैछ। उक्त तीन साता लामो लकडाउन सकिनुअघि नै दोस्रो चरणको १९ दिने लकडाउनको घोषणा गरिएको हो। ‘लकडाउनका कारण जनताको अप्ठ्यारा कसरी सम्बोधन गर्ने? लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नदिने लगायतका विषयमा राज्यहरुसँग निरन्तर छलफल गरियो। यो छलफलमा सबैको एउटा सुझाव रह्यो लकडाउनलाई बढाउनुपर्छ। सबै सुझावहरुलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा लकडाउनलाई ३ मेसम्म बढाउने निर्णय गरिएको छ,’ मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा भने।
त्यसैगरी मोदीले दोस्रो चरणको लकडाउनमा केही खुकुलो हुने संकेत गरेका छन्। उनले आगामी एक साताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै स्थानीयस्तरमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने र नबनाउने निर्णय लिइने पनि बताएका छन्। ‘अप्रिल २० सम्म हर जिल्ला, हल टोल, हर राज्यलाई नजिकबाट हेरिनेछ। लकडाउनको पालना कसरी पालना गरिएको छ? कोरोनाबाट कसरी ती क्षेत्रलाई बचाइएको छ? त्यसको आधारमा निर्णय लिइनेछ’ मोदीले भनेका छन्।
जुन क्षेत्रले त्यसवधिमा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नेछन् त्यहाँ अप्रिल २० बाट केही अत्यावश्यक गतिविधिका लागि छुट दिइने मोदीले बताएका छन्। ‘जो क्षेत्र यो अग्निपरीक्षामा सफल हुनेछ, जसले आफ्नो क्षेत्रमा हटस्पट बढ्न दिँदैनन् ती क्षेत्रमा २० अप्रिलबाट केही अत्यावश्यक गतिविधिका लागि छुट दिइनेछ। त्यो छुट सशर्त हुनेछ। बाहिर निस्कन पाउने नियम निकै कडा हुनेछ,’ मोदीले उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, बैशाख २, २०७७, ०१:५४:२९